Wadadii Xaaji Khayr oo dib u furid lagu sameeyay ka dib markii ay ku Xayirmeen gadiid tira badan. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wadadii Xaaji Khayr oo dib u furid lagu sameeyay ka dib markii ay ku Xayirmeen gadiid tira badan.
Wadadii Xaaji Khayr oo dib u furid lagu sameeyay ka dib markii ay ku Xayirmeen gadiid tira badan.
June 7, 2019 - By: Mohamud Nadif
In ka badan 200 oo gaari oo kuwa xamuulka qaada ah isla markaana u kala goosha gobolada Soomaaliya ayaa dib u bilaabay isu socodkooda ka dib markii mudo dhan 4 cisho ah ay ku xayirnaayeen, guud ahaan waxaa burburay wadada isku xirta Qardho iyo Garoowe taas oo ay dhistay Dawladii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, Dhaawaca wadada gaaray ayaa dhan 1 killomitir iyo bar, waxaana Banaanka yimmi birihii ku jiray Buundoonyinka.
Eng Maxamed Cabaas Nuur, Ing Maxamed Cabaas Jibriil iyo Ciise Xasan Ciise oo ka tirsa shirkada Dhismaha ee Jibcon ayaa qiimayn ku sameeyay wadada, Engineeradu waxay sheegeen in dhismihii hore ee jidkaan aan si wayn looga fekerin meelaha ay biyuhu ka gudbayaan, waxay sheegeen in Biyuhu ay haaayeen kuwa xoog badan, Engineeradu waxay qireen in wadadaan dhisme balaaran ay u baahan atahay, dawladana ay doonayso in ay wax wayn ka qabto dhismaheeda.
Taliyaha Qaybta Gobolka Karkaar Axmed Jaqanf iyo Taliyaha Taraafikada Wadooyinka Maxamuud Finiin waxay sheegeen in dawladu ay goaansatay in wax gaari ah uusan habeenkii safri doonin marka laga reebo xaaladaha gaarka ah, waxay sheegen in taas loo samayn doono si loo yareeyo khataraha habeenkii ee shilalka la xiriira iyo badqabka hantida shacabka inta laga hagaajinayo wadooyinka.
Masuuliyiin ay ka mid yihiin Gudoomiyaha Gobolka Karkaar, La taliyaha Wasaarada Arimaha Gudaha Puntland Jaamac Dhega dheere iyo duqa degmada Dangorayo oo ka mid aha masuuliyiintii gaaray goobta waxay si rasmiya u fasaxeen in ka badan 200 oo gaari xamuulka ah oo ku xanibnaa wadada isku xirta Garoowe iyo Qardo. waxay sheegeen in dawlado ay wado qorshe lagu dhisayo wadadaan isla markaana ay is arkeen gudigii madaxweyne ku xigeenku Puntland u xilsaaray arimaha Wadooyinka.
Jaamac Dhega dheere la taliyaha Wasaarada Arimaha Gudaha Puntland waxa uu dawlada federaalka ah ugu baaqay in ay Puntland ka caawiyaan waxna ku darsadaan dhismahaaa wadadaan halbowlaha ah ee Go’day.